I-Ella Retreat- Indlu Esemaphandleni Yabathandi bemvelo - I-Airbnb
I-Ella Retreat- Indlu Esemaphandleni Yabathandi bemvelo
Indlu eyenziwe ngomhlaba sinombuki zindwendwe onguDanushka
I-Ella Retreat inikezela ngendawo yokuhlala kanokutsho yezindlu zasemaphandleni ezihonjiswe kakuhle ezinento yonke yokunxiba, igumbi lokuhlambela nekhitshi, zonke zenza abantu baphefumle. Kwabo banomdla wokuba kwindawo enye kwindalo i-Ella Retreat inikezela ngobunewunewu ngoxa besenza izinto eziphambili zendalo ezijikelezileyo.
Yenziwe yahonjiswa yindalo ekwindawo ephambili kulo lonke umbono. Ukuhlonipha indalo kuye kwaqwalaselwa kwaza kwahlengahlengiswa ukuze iVision iphile.
Indlela eyakhiwe ngayo indlu esemaphandleni i-Ellaretreat yenzelwe ukudibanisa indalo ejikelezileyo kunye nokuxabisa izinto zendalo zasekuhlaleni. Izinto ezifana namatye endalo, iinkuni ze-bamboo kunye namagqabi ziye zasetyenziswa ngexesha lokwakhiwa kwale ndlu isemaphandleni. Ngaphakathi uza kufumana izinto zendalo ezingakumbi ezifana nelitye lenyengane, umama weparile kunye nemabhile. Ukudityaniswa kwemibala kukhethwe ngononophelo ukuze kudityaniswe indalo apho iindwendwe ziziva zikwindawo enye nendalo. Umhlaba usecaleni kweengxangxasi zaseKithalElla (ingxangxasi yexesha elithile lonyaka)
Ikhuthazwa kwaye yenziwa kunye nendalo ephambili kulo lonke umbono. Abanikazi abayixabisa le ndawo yeyona nto iphambili ekuyileni kwethu.
Ukuhlonipha indalo kunye neendlela zokugcina nokuphucula imeko kuye kwaqwalaselwa kwaza kwahlengahlengiswa ukuze iVision of Ella Retreat iphile.
Izinto ezifana nokuphinda zisetyenziswe, ukulawula inkunkuma kunye nezinto zethu zendalo ziye zajongwa ngeendlela ezifana nokwahlulwa kwenkunkuma, ukungabikho komthetho weplastiki kwindawo yakho, iintsuku ezingabhatalelwayo zenyama kunye nendawo eyahlulwe phakathi. Ukugcakamela ilanga kuza kusetyenziswa kakhulu kwi-Resort ukuze kugcinwe amandla apho indlu yethu igcina ubuhle bemvelo obusingqongileyo ngoxa inika iindwendwe amava okuphucula ummandla we-Ella osebenzisa ubuhle bendalo beNgingqi.
Umbuki zindwendwe ngu- Danushka
Sifumaneka apha ngezantsi ekhankanyiweyo
Umphathi Wethu Wendawo Yokuphola Nomphathi Wendlu uyafumaneka ngokobuqu nanini na.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ella